Collabora Inozivisa Kuunza Virtual Reality kuLinux Desktop | Linux Vakapindwa muropa
Collabora Inozivisa Kuunza Virtual Reality kuLinux Desktop
Collabora Yakazivisa nhasi itsva yakavhurwa sosi purojekiti iyo inobvumidza mamiriro emifananidzo uye mamaneja ewindo Linux inonakidzwa neicho chaicho (VR). Iyo projekiti, inonzi xrdesktop, inobhadharwa neValve, kambani inozivikanwa, pakati pezvimwe zvinhu, yekuve muridzi weiyo Steam vhidhiyo yemutambo wepuratifomu. xrdesktop inogadziridzwa kuti ibatanidze munzvimbo dziripo dzemifananidzo dzakadai seKDE / Plasma neGNOME, zvichivaita kuti vashande mune chaiyo chaiyo nguva yekumhanya.
Sekureva kwaCollabora, chirongwa ichi xrdesktop yakagadzirirwa kusangana zvakananga munzvimbo yedu yakajeka Unofarira. Izvi zvinobvisa kudiwa kwekushandisa akazvitsaurira munyori kumhanya muVR. Izvo zvinoreva zvakare kuti ichashanda pasina kuita chero akakosha marongero, asi kutanga chete mu KDE / Plasma neGNOME. Kana zviri zveimwe nzvimbo dzemifananidzo, Collabora anongoti «xrdesktop yakagadzirirwa kusanganisa mune chero desktop«, Izvo zvinoratidza kuti ichakurumidza kuwanikwa, semuenzaniso, muXfce kana MATE.
xrdesktop, chirongwa cheCollabora icho chichaunza VR kuLinux
Muchokwadi, iyo kambani inoti mukutanga kwavo kuvhura vakatarisa 'iyo inonyanya kufarirwa Linux desktops«, Uye akarurama: KDE / Plasma inowanikwa munzvimbo zhinji dzakakurumbira, dzakadai saDebian kana Kubuntu, nepo GNOME ndiyo inoratidzira nharaunda inoshandiswa neimwe yeanonyanya kuzivikanwa Linux kugoverwa, Canonical's Ubuntu, pamwe neDebian, Fedora, uye mamwe akawanda maLinux anoshanda masisitimu.
xrdesktop inoshanda iine seti yeGlib-based maraibhurari uye yemukati Vulkan renderer. Iyo software iri yakanyorwa chose muC uye haina kuuya neiyo yakamira windows hwindo maneja, zvinoreva kuti inogona kungosanganisirwa mune iripo. TInogona zvakare kushandiswa seyakatsaurwa chiitiko application uye inouya neyakafukidza modhi kubvumira desktop windows kuti ifukidzirwe pamusoro pechiripo virtual chaiyo application.
Ivo vanofarira kuyedza xrdesktop vanogona kuitora kubva pano.
Khronos OpenXR: API nyowani yeVR neAR
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Collabora Inozivisa Kuunza Virtual Reality kuLinux Desktop
Iyo nyowani vhezheni yeBlender 2.80 yakazoburitswa, ziva izvo zvitsva
Manjaro ichasanganisira yemuno rutsigiro rweSpap uye Flatpak mapakeji nekutenda kuna fpakman